3A fanamainana ny gazy voajanahary, HDS ho an'ny Naphtha, Cataline classe Alumina mandroso - Gascheme
Catalista momba ny famonoana rano
Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), mpamatsy iraisam-pirenena ny catalista sy ny adsorbents. Miantehitra amin'ny zava-bitan'ny teknikan'ny foibem-pikarohanay, SGC dia manolo-tena amin'ny famolavolana, famokarana ary fizarana catalistes sy adsorbents amin'ny indostrian'ny famolavolana, petrochemical ary simika. Ny vokatra SGC dia ampiasaina betsaka amin'ny fanavaozana, hydrotreating, fanavaozana ny etona, fanarenana solifara, famokarana hidrogen, gazy sentetika, sns.
Mpanolo-tsaina sy mpanadihady momba ny fanadiovan-tsolika, petrochemical ary fanadiovan-tsolika voajanahary.
R&D amin'ny fitaovana (Zeolites) sy catalista. R&D amin'ny fanodinana solika (hydrotreating / hydrocracking / reforming / isomerization / dehydrogenation) ary fanodinana solika voajanahary (cla / TGT).
Ekipa manam-pahaizana manana traikefa manan-karena amin'ny R&D ary miasa azo ampiharina amin'ny zavatra takinao.
Ny metodôlika valin'ny valiny (RSM) dia nampiasaina handinihana ny fizotry ny fitrandrahana asidra azôty ny fako Co Mo miorina amin'ny hydrotreating catalyst. Ny tanjon'ity ...
Fianarana momba ny fizotran'ny famolavolana asidra an'ny catalyst hydrotreating miorina amin'ny Mo Mo
Ny metodôlika valin'ny valiny (RSM) dia nampiasaina handinihana ny fizotry ny fitrandrahana asidra azôty ny fako Co Mo miorina amin'ny hydrotreating catalyst. Ny tanjon'ity fandinihana ity dia ny fampidirana ny CO sy Mo avy amin'ny catalyst lany amin'ny solvent amin'ny endrika tsy voavaha amin'ny rano, mba hanamorana ny fahadiovana manaraka ...
Fanomanana ny sivana molekiola karbonika avy amin'ny fibre karbaona
Raha atambatra ny teboka jujube an'ny huanbingwei sy CMB, dia hanana ireto tombony manaraka ireto ny fitaovana vaovao: tsy hisy vovoka vokarina rehefa ampiasaina. Hatsaraina amin'ny 5-FU izy io. Ny sivana molekiola karbonina miaraka amin'ny fahaizan'ny fifanakalozana ion dia azo omanina amin'ny alàlan'ny fitsaboana ara-batana sy simika bebe kokoa. The ...
Fananana sy fampiharana ny karbaona ampandehanana
Carbon activated: karazana adsorbent tsy polar ampiasaina bebe kokoa. Amin'ny ankapobeny dia mila hosasana amin'ny asidra hidroklorika malemilemy izy, arahin'ny etanol, ary avy eo hosasana amin'ny rano. Aorian'ny fanamainana amin'ny 80 ℃ dia azo ampiasaina amin'ny chromatography tsanganana izy io. Carbon activated granular no safidy tsara indrindra ho an'ny ch ch ...